Ireo an'ny Cupertino dia mandefa ny beta 2 an'ny watchOS 4.2.2 ary ny tvOS 11.2.5 ho an'ny mpamorona | Avy amin'ny mac aho
Ny beta faharoa an'ny watchOS 4.2.2 sy tvOS 11.2.5 dia eo am-pelatanan'ny mpamorona ankehitriny. Omaly fotsiny dia namoaka ny kinova beta an'ny macOS High Sierra ho an'ny mpamorona i Apple ary androany dia efa ananantsika ny ambiny amin'ireo kinova misy, ao anatin'izany ny iOS 11.2.5.
Toy ny mahazatra mitranga amin'ny kinova beta navoakan'i Apple, tsy hitantsika amin'ny famaritana ny fanovana natao tamin'ireo kinova ireo fa mazava fa manazava izany izy ireo miampy ny fahamarinan-toerana sy ny fanatsarana ny fiarovanaary koa ny fanamboarana bibikely mahazatra avy amin'ireo kinova taloha.
Tsy manana fisalasalana momba ny fanatsarana nampiharina tamin'ny kinova beta navoaka ho an'ny mpamorona izahay, saingy mazava fa ny mpampiasa dia mila fanovana eo amin'ny maso na amin'ny asany ary amin'izao fotoana izao dia tsy misy soritr'ireo fanovana ireo. Raha misy fanovana miseho amin'ity lafiny ity dia havoakanay mivantana amin'ity lahatsoratra ity izy ireo. Aza adino fa kinova beta ireo ho an'ny mpamorona voasoratra anarana ary noho izany tsy tsara ny mametraka azy ireo amin'ny fitaovana ampiasaintsika isan'andro. Tadidio ihany koa fa ny Apple Watch dia tsy manan-tsafidy hiverina amin'ny kinova taloha, ka ny fametrahana kinova beta dia midika fa tsy maintsy miaritra hatramin'ny famoahana ny kinova ofisialy farany isika.
Apple dia manohy ny fanatsarana ny tvOS sy ny watchOS amin'ny taham-pahalalana mitovy amin'ny sisa amin'ny rafitra miasa, amin'ny tranga watchOS dia tsy manana beta ampahibemaso izahay fa amin'ny macOS, iOS ary tvOS dia manana ny safidy hametraka ireo beta ampahibemaso ireo isika raha mbola voasoratra ao amin'ny programa developer. Na eo aza izany, ny tolo-kevitro dia ny hialana amin'ireo kinova beta raha toa ka manampy tsy fahombiazana na tsy fitoviana amin'ny fitaovana na fampiharana anay izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Cupertino dia mandefa beta 2 an'ny watchOS 4.2.2 ary tvOS 11.2.5 ho an'ny mpamorona